नयाँ परिस्थितिकाे मूल्यांकन गर्न सक्ने याेग्य पात्र नै भएनन्... - हिमाल दैनिक
नयाँ परिस्थितिकाे मूल्यांकन गर्न सक्ने याेग्य पात्र नै भएनन्…
सत्ताको भोग गर्न थालेदेखि मानिसले भाइ/भाइ विर्सन्छन् र तँ ठूलो कि म ठूलो भन्ने कुरा केन्द्रमा आउँछ
३ फाल्गुन २०७४, बिहीबार १९:२७
नेपाली कांग्रेसको पुनर्यौवन-५
नेपाली कांग्रेसको पुनर्याैवन विषयलाई केन्द्रमा राख्दै हिमाल दैनिकले पछिल्लो समय नेपालको राजनीति र विशेष गरी यो पार्टीलाई नजिकबाट चिन्दै र विश्लेषण गर्दै आएका विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकसँग बहस र विचार विमर्शको सुरूवात गरेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रखर विश्लेषक प्रदिप गिरीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित विचारको सम्पादित अंशः
नेपाली कांग्रेसको चुनावी दुरगतीलाई लिएर अनेकौं प्रश्न बजारमा उठ्न थालेको छ। एक जना मित्रले सदासयकासाथ एउटा बडो अचम्मको प्रश्न गर्नुभयोः प्रतिबन्धीत कालमा कांग्रेसले आफ्ना युवालाई छानेर विदेश पढ्न पठाउने तथा कार्यकर्तालाई विश्व राजनीतिक दर्शनसँगै नेपाली समाजको अध्ययनलाई प्राथमिकता दिने गर्थ्यो। तर, अहिले नेता कार्यकर्तालाई अध्ययनभन्दा फरक गतिविधिमा प्राथमिकता दिएर प्रतिभाशाली युवा नेतृत्व विकासको क्रम भंग गराएको हो?
यो प्रश्न निश्चय पनि मार्मिक छ। यस्तो प्रकारको प्रश्नले समाजमा देखिएको धेरै कुराहरुको उजागर गरेको छ।
कुनै पार्टीको कम्तिमा पनि एउटा राजनीतिक प्रशिक्षण विभाग बनाउनुपर्ने हो। मैले बुझेसम्म एमालेमा प्रशीक्षण विभाग थियो र माओवादीसँग पनि छ। नेपाली कांग्रेसको विधानमा पार्टीको उपसभापतिनै पदेन प्रशिक्षण विभाग प्रमुख हुने व्यवस्था छ र प्रशिक्षण समिति पनि छ।
रामचन्द्र पौडेल उपसभापति भएको समयमा प्रशिक्षणका प्रयास पनि भए। तर, प्रशिक्षणमा के कुराको प्रशिक्षण दिने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ।
यसलाई द्वन्द्वात्मक तर साथीले चित्त नदुखाउने शैलीमा यसो भन्नुपर्लाः प्रशिक्षकले नै पहिले प्रशिक्षण लिनु आवश्यक छ। प्रशिक्षक आफैं प्रशिक्षित नभइ दिएको प्रशिक्षण काम लाग्दैन।
रह्यो विदेश पढ्न पठाउने र प्रशिक्षीत गराउने कुरा, त्यो निर्वासनको समयमा अर्कै राजनीति थियो। सत्ताभन्दा बाहिर रहँदा बेग्लै राजनीति थियो।
उदाहरणका लागि, भारतले राजनीतिमा प्रवेश गरेका दिनदेखि अर्थात भारतमा चुनाव प्रणाली सुरू नहुन्जेल, प्रमुख ऐतिहासिक पार्टी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलाई महात्मा गान्धीले हत्केलामा खेलाए जस्तै गरेका थिए। तर, त्यहाँ जब चुनाव प्रणाली सुरू भयो त्यसपछि गान्धीप्रति नै प्रश्न उठाउन थालियो। किनभने, गान्धी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसमा लागेका जतिलाई टिकट दिन सक्दैनथे। उनी टिकट वितरणका लागि संसदीय बोर्डमा बस्दैनथे। उनको आफ्नो भन्ने मानिस कोही थिएनन्। भारतमा सबै कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई टिकट चाहिएको थियो। त्यसैले भारतमा जब चुनाव प्रणाली सुरु भयो, त्यसपछि गान्धी अलग थलग भए। उनी आफ्नो कुटीमा गएर रामनाम जप्न थाले।
तर भारतमा फेरि महासंकट आयो, आन्दोलनको बेला आयो, त्यतिबेला फेरि गान्धीकै आव्हानमा सन् १९४२ को विद्रोह थालियो। राजनीतिमा लागेका मानिसहरू जुन आवरणमा लागेका भए पनि, जे शब्द प्रयोग गरे पनि मुख्य त स्वभावले नै सत्ता खोजिराखेको हुन्छ।
सत्ताको भोग गर्न थालेदेखि मानिसले भाइ भाइ विर्सन्छन् र तछाड मछाड गर्न थाल्दछन्। तँ ठूलो कि म ठूलो भन्ने कुरा केन्द्रमा आउँछ।
त्यसैले भारतको पनि जुन त्याग युग थियो, त्यो युग भारतको आजादी पछि सकियो। एक से एक त्यागी र महात्माहरू चार आना जग्गामा घर बनाउने, फ्ल्याट जोड्ने, गाडी जोड्ने र छोरा छोरीलाई विदेश पढ्न पठाउने कार्यमा लागे।
त्यसैले दुनियाँमा के देखिएको छ भने, यो युग परिवर्तन भएझैँ (सत्य, त्रेता, द्धापर र कलि युग आए झै) चार वटा यी अनिवार्य युगको चरणबाट राजनीति पनि गुज्रिरहेको छ। एउटा सत्य युग थियो। किसुनजी १३, १४ वर्षसम्म जेल बस्नुभएको थियो। उहाँ एक्लै बस्नु भएको थिएन, रामचन्द्र पौडेल पनि बस्नु भयो। शेरबहादुर पनि बस्नु भयो। उहाँले जेलमा पनि पढ्नुभयो होला।
किसुनजीको सदासयता र प्रेरणाले हाम्रो शेरबहादुरजी विदेश पनि पढ्न जानुभयो। उहाँबाहेक अन्य दुई तीन जना पनि गएजस्तो लाग्छ।
अब अहिले भोगको युगमा आएपछि कांग्रेस सत्तामा आउनासाथ शेरबहादुरजी गृहमन्त्री बन्नुभयो। गृहमन्त्री भएपछि हरेक गृहमन्त्रीलाई भावी प्रधानमन्त्री हुने महत्वाकांक्षा जाग्छ। त्यसपछि शेरबहादुरजीलाई पढ्ने कहाँको फुर्सद र पढाउने कहाँको फुर्सद पाउने? त्यसैले आज कांग्रेसले पार्टीमा कार्यकर्तालाई पढाएन भन्ने कुरा भन्दा प्रशिक्षणमा ध्यान दिएन भन्नु उचित हुन्छ।
तर एउटा कुरा, प्रशिक्षणको सबैभन्दा बढी आवश्यकता थियो भने यो विगत ३० वर्षको अवधिमा थियो। समकालिन समयलाई मानिसले बुझ्दैनन्। आज के भयो भन्ने कुरा एक सय वर्षपछि थाहा हुन्छ अथवा सायद २ सय वर्षपछि थाहा होला।
सोभियत यूनियनको विघटनपछि विश्व राजनीतिको परिदृश्य बदलिएको छ। त्यसैले कांग्रेस सोभियत यूनियनको विघटनको लगत्तै सत्तामा आएको थियो। नयाँ परिस्थितिबारे मूल्यांकन गर्नका लागि कांग्रेसमा पात्रताको योग्यता भएन। कांग्रेस किन बिग्रियो भन्ने कुरा छाडिदिउँ अथवा नबिग्रिएको पनि हुन सक्छ।
अहिले चुनाव हार्‍यो भन्दैमा कांग्रेस धेरै असफल भएको छैन। यो लड्दै छ, उठ्दैछ। कुनै पार्टीको एउटै उद्धेश्य केबल सत्ता प्राप्ति मात्रै हो त? सत्तामा २० वर्ष बस्दैमा कुनै पार्टी सफल हुन्छ?
२०४७ पछि कांग्रेस सामू एउटा ठूलो चुनौति थियो। हरेक चुनौति चुनौति मात्र हुँदैन, ठूलो अवसर पनि हुन सक्छ। नेपाली कांग्रेसले नेपालका लागि मात्र होइन, सिंगो दक्षिण एशियालाई बाटो देखाउन सक्थ्यो। कांग्रेस लामो समयदेखि संघर्ष गरेर आएको हुँदा मामुली पार्टी थिएन। विपी कोइरालाको समयमा हरेक मुलुकमा प्रजातन्त्रको नाश भएको थियो। जस्तै वर्मा, जहाँ प्रजातन्त्र थियो त्यो नाश भयो। पाकिस्तानमा प्रजातन्त्र थियो त्यो पनि नाश भयो।
भारत बाहेक छेउछाउका सबै मुलुकमा प्रजातन्त्र नाश भयो। श्रीलंका पनि एक प्रकारको दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी बाटोमा गयो र नश्लवादी जातीय राजनीति सुरु भयो। अफगानिस्तानमा पनि प्रजातन्त्र थियो त्यो पनि समाप्त भयो।
सबै एक-एक गरी नाश भएर गयो। प्रजातान्त्रिक प्रणाली र परिपार्टीको मात्रै होइन ती देशका राजनीतिक पार्टीहरु पनि नाश भएर गए।
तर नेपालमा नेपाली कांग्रेसमात्रै एउटा त्यस्तो पार्टी थियो जुन लगातार ३० वर्षसम्म प्रतिबन्ध र निर्वासनमा रहेर, यसका नेताहरु जेलमा रहेर मौखिक रुपमा भए पनि सँधै समाजवाद समाजवाद भनिरहे। तर, त्यो समाजवाद के थियो? त्यो कम्युनिष्टको एकदलीय तानाशाही सिद्धान्तमा आधारित थिएन र त्यो पूँजीलाई आत्मसर्मपण गर्ने पार्टी थियो। विश्व भूमण्डलीकरणपछि हामीले विश्व अर्थतन्त्रको प्रभावबारे सोचेनौँ र त्यसको चक्करमा एकाएक परेर निजी पूँजी, बजारको बर्चश्वमा गयौं।
हाम्रा अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. रामशरण महतले ल्याएको आर्थिक नीति अथवा अरू कसैले ल्याएको पोलिसीमा गयौं। विचरा रामशरण महतले पनि आफैंले त्यो नीति ल्याएका थिएनन्। उनले विश्व वैंकको सल्लाहमा ल्याएका थिए। कांग्रेसले कहिल्यै पनि नेपाललाई चाहिने मौलिक किसिमको समाजवाद कस्तो हुन्छ भनेर सोच्ने विचारनै गर्न सकेन।
त्यो विचार गर्न सक्ने क्षमता किसुनजीमा थियो तर उहाँ प्रारम्भमै पाखा पर्नु भयो। सायद त्यतिबेला उहाँमा पनि सैद्धान्तिक समस्यालाई अध्ययन गरेपछि मात्रै पार्टी बलियो हुन्छ भन्ने सोच थिएन होला। सँधै धर्मका कुरा गर्ने भाग्यले खानुपर्छ, पुर्पुरोले खानुपर्छ भन्ने कमजोरी उहाँमा पनि थियो। केही कुरा पनि मैले गरेको होइन सबै ईश्वरले गरेका हुन् भन्न थाल्दा अलिकति त्यस्तै असर पर्‍यो।
गिरिजाबाबुलाई त अध्ययन विज्ञान तर्फ ध्यानै थिएन। यी दुबैको नेतृत्वमा यति ठूलो परिवर्तन आयो, ३० वर्षको संघर्षपछि कांग्रेस सत्तामा आएको छ, नेपाललाई कस्तो बाटोमा अघि बढाउने भन्नेबारेमा कुनै दिन छलफल भएन। त्यो एकदिनको छलफलको विषय थिएन। यसमा देखिएका कमिकमजोरी र समाजका समस्याबारे लामो विश्लेषण गर्नुपर्ने थियो। त्यो गर्न सकिएको भए के असर पर्थ्यो?
हामी भूमण्डलीकरणको प्रभावबाट बाहिर आउन सक्दैनथ्यौँ। त्यहीभित्र रहनु पर्थ्यो। भूमण्डलीकरण र बजारी अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गर्दा गर्दै पनि राज्यले आम नागरिकका लागि छाना, माना र नाना, अथवा गाँस, बास र कपासको जिम्मेवारी लिन सक्थ्यो। अथवा स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मेवारी लिन काम सकिन्थ्यो। तर, विडम्वना, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई वेलगाम निजीकरण गर्न दिएर अहिले कुन हालतमा पुगेको छ?
यी समस्याका विषयमा नेपाल भित्रै पनि बहस हुन सक्थ्यो। विभिन्न देशमा स्वास्थ्यका समस्या देखिएका छन् त्यसको समाधान गर्न उनीहरुले के गरेका छन्? जस्तो क्युवाले कसरी यो समस्या सम्बोधन गर्न के कसरी गरेको छ त्यो अनुभवबाट पाठ सिक्न सकिन्थ्यो। जापानमा भूमिको मात्रा थोरै छ। त्यसका बाबजूद पनि जापानको कृषि उत्पादन विश्वमै उत्कृष्ट नमूनाको रुपमा रहेको छ।
कतिपय कुरा हामीले चीनसँग पनि सिक्न पर्ने थियो। लोककल्याणकारी राज्यको सवालमा वेलायत अर्को उदाहरण हो। दोस्रो विश्वयुद्वपछि वेलायतले लिएको लोककल्याणकारी राज्यको नीतिबाट हामीले पाठ सिक्न सक्ने थियौं। पछि मार्गरेट थ्याचरको पालामा उनले त्यो नीतिको विरोध गर्दा परिणाम के भयो? त्यसबाट पनि पाठ सिक्न सकिन्थ्यो। हामीलाई नेपालमा केही गरौं भन्ने इच्छाशक्ति भएको भए यसबाट सिकेर केही गर्न पनि सक्थ्यौं। नेपालमै यहाँको विषयमा बुझ्न सकिने थियो। नेपालमा सिक्न र बुझ्न नसकिने कुराका लागि बाहिर जान सकिन्थ्यो।
त्यसैले पार्टी नेतृत्वले अध्ययनका लागि यसका सम्भावित युवा नेतालाई विदेश किन पठाएन भन्ने कुराको पनि आफ्नै मूल्य छ। एक त प्रतिबन्धित कालमा हाम्रो पार्टी र नेताहरु फुर्सदमा थिए। कार्यकर्ता पंक्तिलाई यहाँ काम पनि थिएन। किसुनजीको शैलीमा पार्टी चलिरहेको थियो। कतिपय नेताहरुलाई यहि बस्न दियो भने अरू कतिपय नेताहरु पञ्चायत छिरेजस्तै गरी छिर्लान कि भन्ने लागेर पनि केहिलाई विदेश पठाएको हुन सक्छ। अथवा कुनै संस्थाले सहजै छात्रवृत्ति दिने गर्दथ्यो र पठाएको होला। तर अब हाम्रो अगाडि चुनौति आयो, सत्ता आयो।
यसमा केही समस्या छन् तर त्यी समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको कमि भयो। हामीले सबै कुराको समस्याको समाधान राज्यले गरिदिन्छ भन्यौ र सर्वाधिकार दियौं। एकाएक भूमण्डलीकरण आयो सोभियत यूनियन विघटन भयो त्यसपछि हामीले यी समस्याको समाधान खुला बजारले गर्छ भन्यौं। यथार्थमा सत्य के हो भने बजारले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँछ तर, सामाजिक न्याय दिन सक्दैन। राज्यले सामाजिक न्यायको पनि कुरा गर्दा उत्पादन घट्छ भन्ने कुरा बेलैमा सोचेको भए, नेपालले देखाएको बाटोमा एकदिन वर्मा, अफगानिस्तान अथवा भारत पनि लाग्न सक्ने थिए होला।
कुनै पनि समाजमा एकाएक सम्पत्ति बढ्यो तर त्यो केही मुठ्ठिभर व्यक्तिको हातमा रहन पुग्यो भने त्यो समाजमा कहिल्यै शान्ति हुँदैन।
केही दिन पहिले एउटा अक्फार्मको रिपोर्टमा भनिएको छ-भारतका एक प्रतिशत मानिससँग त्यहाको ८० प्रतिशत सम्पत्ति छ। अमेरिकामा विगत २० वर्षमा त्यहाँका ७ जना मानिसले ९० प्रतिशत सम्पत्ति जम्मा गरिसकेका छन्। कुनै पनि समाजमा असमानताका विषय उठायो भने त्यो समाजमा हिंसा अनिवार्य हुन्छ। हेरिरहनुहोस्, २१औं शताब्दी नेपालको लागि मात्र होइन सिंगो विश्वका लागि चिन्ताको विषय हुनेछ।
हामीलाई लागेको हुन सक्छ अब डोनाल्ड ट्रम्पले भने अनुसार सबै गर्लान्। विनलादेनले अमेरिकामा गरेको आक्रमण अन्तिम आक्रमण होइन। थुप्रै दिनमा यस्ता आक्रमण हुन सक्छन्। किनभने, अमेरिका, भारत र विश्वका थुप्रै मुलुकले सामाजिक न्यायतर्फ ध्यान दिइरहेका छैनन्।
त्यो काम नेपालले समाजवादको आलोकमा र समाजवादको प्रेरणामा आज भन्दा २८/२९ वर्ष अघि नै गर्न सक्थ्यो।
‘काठमाडौं बसेर दिएको अादेशले अब पार्टी चल्दैन’
Prevपछिल्लोमेयर कप शुरु
अघिल्लोग्यारेज तथा वर्कसप व्यवसायीको लागि यस्तो कडा नियमNext